Ọ bụ ihe nwute, ọ bụrụla ihe ama ama na ọrụ ọtụtụ ndị na -arụ ọrụ, ịchụpụ ya maka ebumnuche akụ na ụba na -alaghachi n'ahịa ndị ọrụ na -enweghị ọrụ na "ịchọ ihe ọ pụtara" na nhọrọ ọrụ ha na -esote. Nke a bụ akụkọ Aurélie, onye anyị na ya zutere taa. N'ebe a kwa, a ga -eche anyị ihu "kpochapụwo" ọzọ: nke ịlaghachi azụ nke na -enyeghị anyị ohere ịgbago elu kama, dị ka onyinye, jiri ịmụmụ ọnụ ọchị!
Afọ 3 gara aga, ị nwere ike hụ Aurélie na shelf nke nnukwu ụlọ ahịa DIY ebe ọ na -eyi uwe onye ndụmọdụ ndụmọdụ. Na 33, yana diplọma azụmaahịa n'aka, Aurélie arụpụtala onwe ya ebe dị mma maka afọ 9 sochirinụ n'ọkwá a. "Ikekwe ọ bụghị n'ogo ikike m na azụmaahịa, mana ọrụ masịrị m, ọnọdụ otu dị mma, achọtara m akaụntụ m ebe ahụ", ọ na -enyocha. Ewezuga na nsogbu akụ na ụba nke ụlọ ahịa ya zutere ga -akọwa njedebe CDI ya. N'ịbụ onye chere ya ihu, nhọrọ atọ na -ebilite ozugbo: nabata mbufe na ụlọ ahịa ọzọ nke akara ahụ. Ọ jụrụ ; iji weghachite onwe ha n'ime ụlọ ọrụ na profaịlụ ọkachamara ọzọ. Anyị adịghị
Gbanwee ọrụ na ndụ ekele maka ọzụzụ onye enyemaka iwu: Aurélie na -agba akaebe. Ọnwa Iri 15, 2021Tranquillus
GỤỌ Usoro nke obodo: ịwepu ọhụụ, nkpuchi 1 nkpuchi na ventilashion kwa awa
gara agaỊghọ onye na -ere ahịa: mgbanwe ọrụ Anissa na -akpali akpali.
-esonụ“Nweghachi onye ọkachamara bụ ime mkpebi. "